प्रचण्ड र किस्नले खाँवो चिथोरेपछि ! | परिसंवाद
गफाष्टक आइतबार, चैत्र २२, २०७७ मा प्रकाशित
हेर काका ! किस्न खनालले बोलेको तिमीलाई सारै मन परे छ । आफ्ना नेताको प्रसंसा र आफ्नो पार्टी अथवा नेताका विरोधीलाई अर्काले ताइँनतुइँको विरोध गर्‍यो भने पनि सारै घत लाग्छ । तिमीलाई त्यस्तै भा’को हो । यो मान्छेको स्वभाव पनि त हो । वास्तवमा किस्न खनालले ओलीको रिसले चुर भएर खाँबो चिथोरेका मात्र हुन ।
जेसुकै भन भिरघरे ! ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट छिटो हटाउनु, नत्र बर्बादै हुन्छ, राष्ट्र रहदैन, खत्तम भयो । ए ! तिमारु माओवादी, जसपा, कांग्रेस मिलेर ओलीलाई खतम पार नत्र … भनेर दाह्रा किटेर एउटा विदुवान व्यक्तिले कस्तो मजाले भने ।
देखिस भतिज भिरघरे ! तेरो काकाको बुद्धि ! ओलीको अनुहार मन परेन भनेर एउटा टपरटुयाँले भन्यो भन्दैमा यिनी मख्ख छन् । बिरालोले खाँबो चिथोर्दैमा मुसा मर्ने भए, झिङ्गाको सरापले डिङ्गा मर्ने भए संसारमा प्राणी नै रहने थिएन ।
बढी बाठी नहो झुम्री ! ओली त अब सकिए सकिए । माधव नेपालका सप्पै सेनाबेना प्रचण्डको नेतृत्वमा मुक्तिको झण्डा फहराउँदै गोलवद्ध हुनेछन् । उता बौद्धिक ब्यक्तित्वहरु किस्न खनाल, त्यो अर्को केजाती छ नि खगेन्द्र तिनारु भारु र डलर डकार्दै भए पनि हाम्रै पक्ष त के भन्नु ओलीको घनघोर विरोधमा छन् । तिनारु पनि जनता उचाल्न माहिर छन् । स्वभाविकै हो । कहिलेकाँही बाँदरले मालिकको नाक त काट्छ नि !
हौ काका ! अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दैनन् । प्रचण्ड र माधवको टेक्ने समाउने ओली नै थिए । उनले दाने (दाहाल-नेपाल) लाई आफ्नो गरी खान जमिनमा छाडी दिए । अहिले पनि माओवादीका सात जना मन्त्री छन् । ओलीलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा जमेर बस्न तिम्रै प्रचण्डले समर्थन दिई रहेका छन् । बिचरा तिम्रा महान काम्रेड आफ्नालाई कारवाही पनि गर्न सक्तैनन्, समर्थन फिर्ता लिन पनि सक्तैनन् । माधव- प्रचण्ड ओलीलाई सरापेर बसेका छन् । सहारा पनि किस्न र खगेन्द्र जस्ता वस्तु खोज्न थाले । बुद्धिमा विर्को लागेपछि ‘दुःख पाइस् मङ्गले, आफ्नै ढङ्गले’ हुने नै भयो नि !
हो भतिज ! दाने खलकले ओलीलाई चार पटक साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निस्कासन गर्‍यो । प्रचण्डलाई एमाले कब्जा गर्ने ठूलो इच्छा थियो विचरा, ओलीको छेउमा दाहाल बबुरो बन्न पुगे । अब प्राण खुस्किने बेलामा संग्रौला र खनाल भन्ने त्यान्द्रो समाउँदै छन् । लठारो हुँ भन्नेले केही नापेन त्यान्द्राले के गर्नु ?
झुम्रीका यस्ता नचाहिने कुरा कति सुन्नु ! बरु भन भिरघरे देउवा र मधेशीले हाम्रो काम्रेड प्रचण्डलाई साथ दिन्छन् कि दिदैनन् ?
काका ! एउटा कुराको जवाफ देउ अनि म तिम्रो कुराको उत्तर दिन्छु । यो सरकारलाई दिएको समर्थन दाहालले कहिले फिर्ता लिन्छन् ? आफ्ना मन्त्रीहर्लाई कहिले कारवाही गर्दछन् ?
हेर भिरघरे खोचे थाप्ने कुरा नगर । जब देउवा लुरुक्क परेर प्रचण्ड काम्रेडको शरणमा आउँछन् तब हामी कदम चाल्न सक्छौं । देउवालाई भेट्न बारम्बार पुग्दा पनि हाम्रो प्रचण्डको विश्वास नगर्ने ? यस्तो पनि नेता हुन्छ ? मधेशी नेता पनि उस्तै रान । बरु ओलीको विश्वास गर्न सक्छौं प्रचण्डको विश्वास गर्न सक्तैनौं भन्छन् । तर, हाम्रो नेता देव गुरुङ्गले २३ गतेसम्ममा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए प्रधानमन्त्री स्वतः हट्ने भनेर खोकी दिए ।
आउनुहोस् ओलीलाई बेसरी सरापौं !
त्यस्तै पाङदुरे कुरा गर्ने नेता छन् र त पार्टी समाप्त भो तपाईहरुको । आफ्नै समर्थनमा बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने पनि कुनै तर्क हो ? वाइयात कुरा गरेर माओवादी आत्मारतीमा रमाई रहन्छ, ओली शासन चली रहन्छ । कुरो यही हो । जनताले रुचाएको र पत्याएको नेता प्रधानमन्त्री छन्, चुनाउमा जाउँ जनताले मतदानबाट गरेको निणर्य मानौ भन्दैछन् । अनि तिमार्का नेता चाहिँ प्रतिगमन भयो, निरङकुस्ता लाधियो भन्दै छन् ।
त्यति मात्र होइन भतिज ! यिनार्का ताथकथित बुद्धिजीवी र पत्रकार भनाउँदाहरु राष्ट्र समाप्त भयो । अब नेपाल छैन भन्दै छन् । भारतलाई कमफर्टेवल हुने सरकार भएन अरे । हाय बौद्धिक दरिद्रता ! चुनावमा जान नसक्ने, जनताले नपत्याउने, अदालतले आफ्नो पक्षमा निणर्य गरे ठीक र नगरे तथानाम भन्ने- यस्तालाई चै जनताले पत्याउनु पर्ने र नेता मान्नु पर्ने ?
मेरो कन्सिरी तात्तिने कुरा नगर झुम्री ! ओलीले के चैं गरेको छ र ! सप्पै राम्रो काम जति हाम्रो प्रचण्डले गरेको छ ! सप्पै राम्रो जति हाम्रो प्रचण्डले गरेको हो। मधेशीलाई र कांग्रेसलाई माया गर्ने हाम्रै काम्रेड प्रचण्ड हुन ।
हुन त हुन काका ! तर, बगरेले खसीलाई माया गरे जस्तै हो प्रचण्डको मायाँ । यो तीन वर्षमा माधव कुमार नेपालले मात्र प्रचण्डबाट बगरे मायाँ पाए । एमालेलाई पनि थिलथिलो बनाए । हाम्रो कांग्रेसलाई त स्थानीय निर्वाचनमा गरेको सहयोगको बदला नराम्रोसंग लिए । अनि फेरि देउवाले उनकै विश्वास गर्नु अरे ! गिरिजालाई पनि राष्ट्रपति बनाई दिएकै थिए प्रचण्डले । यतिको कृतघ्न अन्त कहाँ पाउनु ।
हेर भिरघरे ! राजनीतिमा जे पनि चल्छ । तिमार्को कांग्रेस र मधेशी दलले साथ नदिए पनि प्रचण्डले किस्न र खगेन्द्रलाई लिएर केही त गर्छन् गर्छन् । बुझिस्। त्यसमा पनि अस्ति शुक्रवार तिमार्को कांग्रेसले ओलीलाई हटाएर सरकारमा जाने भनेर हाम्रो प्रचण्डको लाइन पास गर्‍यो । अब छ महिना देउवा त्यसपछि हाम्रो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ।
नचाइने कुरा नगर काका ! निणर्य गरे पनि मधेशी दलले साथ दिदैन । तिम्रो प्रचण्डलाई भित्री रुपमा कांग्रेसले नै विश्वास गर्दैन । किस्न र खगेन्द्रलाई लिएर सरकार बन्दैन । निरंकुशता र प्रतिगमन भयो अरे । हाम्रो देउवा दाइको कुशलता र प्रचण्डको अग्रगमन जनताले नराम्रोसंग भोगी सकेका छन् । काका ! तसर्थ थेचारिएर बस्नुको अरु विकल्प छैन ।
पानी दिएँ आखिर
नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोगः स्वास्थ्यका सबै विधाको साझा आयोग बनोस्